Igwe na-ekpo ọkụ, Igwe ikuku na-ekpo ọkụ ikuku - Max wingkwa Akwa
2004: Nweta ikike mbupụ wee bupụ igwe anyị na ofesi;
2005: nwetara OA asambodo na onyinye Zhejiang High Technology Ngwaahịa;
2006: O gafere ISO9001: 2000;
2011: Wepụ ya na ụlọ ọrụ ọhụrụ na mpaghara ụlọ ọrụ:
2015: Max ghọrọ ụlọ ọrụ ọha na eze nwere koodu ngwaahịa 831 854.
2020: Igwe igwe ikuku ikuku na-ekpo ọkụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'ahịa.
Tọrọ ntọala na 1985
24 afọ ahụmahụ
Nwee ume Machine MA ...
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Kwesịrị ekwesị maka nkwado nke akụkụ nkwonkwo nke uwe na-enweghị ntụpọ. Nrụgide na oge nwere ike idozi iji nweta nsonaazụ kachasị mma Teknụzụ Nka Voltaji: 220V Ike: 2.5KV Okpomọkụ: 50-220O C Oge: 1-99s Mpaghara ọrụ: 40 × 20 Nrụgide ọrụ: 0.5Mp
Ultrasonic ịcha ...
Njirimara Kwesịrị ekwesị maka nkwonkwo nke ihe, ọsọ, nrụgide na ugboro ole nwere ike ịhazigharị iji nweta nsonaazụ kacha mma. Nka na ụzụ teknụzụ Speed: 0.5-10m / min Nrụ ọrụ: 0.5Mp
Enweghị nsogbu silinda ndina ...
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Uper na obere rollers na-agba ọsọ ọsọ iche, 10shrinkage mmemme ebe nchekwa nwere ike ịchekwa, nkwado ndabere na mpaghara maka kpo oku tankị, ihe nrụgide mgbanaka bụ ihe a na-agbanwe agbanwe, akwa akwa na-arụcha ihe, ihe ntanetị arụ ọrụ, nhọrọ ndị ọzọ n'ọtụtụ ngwa na ngwaọrụ maka mmepụta chọrọ. Usoro ...
Ngwa Women enweghị nkebi uwe ime, nwoke ...
Hot Air onuete akara M ...
Nkọwa ngwaahịa: Njirimara 1.Adopt PLC e ...
Enweghị nsogbu Cylinder Jikọọ ...
A mara ọkwa nke ndị na-emepụta nke isi ihe nke atọ maka mgbochi na njikwa ọrịa
Fewbọchị ole na ole gara aga Ndepụta nke ndị na-emepụta nke isi nke isi nke ihe ndị bụ isi maka mgbochi na njikwa ọrịa mara ọkwa Akụkọ a bụ maka manks Obi abụọ adịghị ya na ogologo ụkọ mmiri na-ezute igirigi ụtọ Jiaojiang na-ede ihe na ọrụ Ihe kachasị egwu "ọrụ atọ" Max ịkwa akwa igwe Co ...
Gbalịa Nnabata Mmepe nke xlọ Ahịa Manx Guangzhou
Na July 1, ọhụụ nke ụlọ ọrụ ịkwa akwa na-elekwasịkwa anya ọzọ na Guangzhou, obodo a ma ama na China. N'ụbọchị ahụ, ọ bụ nnukwu ụbọchị maka ụlọ ọrụ ahụ. The nanị ụlọ ahịa nke Guangzhou Xiaoping igweoduakwa na "Xiaoping agịga ụgbọ ala obodo" meghere n'otu ụbọchị, ha wer ...